“အဝေးကစေတီ”(မြောက်ဥက္ကလာပ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » “အဝေးကစေတီ”(မြောက်ဥက္ကလာပ)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 25, 2013 in Local Guides, Photography, Travel | 28 comments
1 ဘေးက မြင်ရတာပါ
ကျနော်ရန်ကုန်ရောက်တိုင်း အောင်မင်္ဂလာကားဝင်းကနေတည်းတဲ့အိမ်ကိုတဲ့အခါ ကုန်းကျော်တံတားကွေးကွေး
မြင့်လဲ အတော်မြင့်သလို ပုဂံခေတ်က စေတီနဲ့ပုံစံတူပါတယ်။
အဲဒီဘုရားအမြင့်ကသာ တက်ကြည့်ရရင် အတော်ဝေးဝေးထိမြင်ရမယ်လို့ထင်မိလို့ပါ။
ရန်ကုန်သာ တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ရောက်ပေမယ့် မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
3 တိုင်လုံးပေါ်က ဇာတ်ထုတ်
2013 နှစ်ဆန်းမှာရန်ကုန်ကို တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာ 2012 ရော 2013 ပါ ဇန်န၀ါရီလဆန်းရဲ့ပထမအပါတ်မှာ ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ တစ်ရက် မယ်လမုဘက်ကို လမ်းလျောက်ရင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
သံလမ်းကိုကျော်ပြီး ဘယ်လိုသွားရမလဲ လို့ အဲဒီနားမှာနေသူကိုမေးကြည့်တော့ အတော်လေးဝေးတယ်ပြောပါတယ်။
6-1-2013နေ့မနက် လုလင်နဲ့လက်ဘက်ရည်သောက်ကြရင်း အဲဒီဘုရားသွားဘို့အဖော်စပ်လိုက်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ဆိုရင် နှစ်ခါခေါ်စရာမ လိုတဲ့လူခြင်းဆိုတော့ သွားမယ်ဆို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောက်ရေတွင်း ကုန်းတံတားကိုကျော်ပြီး လမ်းအနောက်ဘက်က ရပ်ကွက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ရန်ကုန်ရောက်တာကြာပေမယ့် နုတ်မဆက်ရသေးတဲ့ ရွာသူ ဘော်ဘော် ကြီး“ “ဂျိုနိုတို့အမေ”ကိုလှမ်းဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်နေပါတယ်ပေါ့ အဲဒီအချိန်မှာ အင်မတန်မှ ၀မ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းကြားလိုက်ရပါတယ်။
“ဒီနေ့ အိမ်မှာ အုန်းထမင်းချက်တာနော် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် လုလင်နဲ့အိမ်လာစားလှည့်တော့”
ဘုရားပုရ၀ုဏ်ထဲအေ၇ာက်ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ နေရာရွေးရင် ခြုံထဲဝင်မိတာ ဆူးပင်တွေနဲ့ခြစ်မိပါတော့တယ်။
6 ကြာကန်နဲ့ နဂါးရုံဘုရား
အလည်လောက်မှာ ဆင်လေးကောင်ခံထားတဲ့ ဆင်းတုတော်တွေ့ခဲ့။
အပေါ်ဆုံးရောက်တော့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာမြူတွေဆိုင်းတော့ စိတ်တိုင်းကျတဲ့ပုံကိုမရခဲ့။
ဟိုးမြောက်ဘက်က အထီးတည်းရှိနေပြီးရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ကျိန်သစ္စာဘုရားကို လှမ်းမြင်ခဲ့။
အောက်ရောက်တော့ ဆင်းတုရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တော့ မီးခြစ်လိုက်ငှားပြီး
ဖယောင်းတိုင်အလင်းရောင်နဲ့ အမွှေးတိုင်အငွေ့ကို စိတ်တိုင်းမကျလို့အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ခဲ့။
8 သစ်ထွင်းပန်းချိ မဟာဇနက္ကဇာတ်တော်
9 ဆင်လေးကောင်တောင် ခံထားတဲ့ဘုရား
လို့ဖုန်းလှမ်းဆက်မှ ဗိုက်ဆာတာကို သတိရမိခဲ့။
သွားရင်းလာရင်း ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စဖြေရှင်းဘို့ ဂန္ဓမာကုန်တိုက်ကြီးထဲ ခပ်တည်တည်ဝင်ခဲ့။
နှစ်ယောက်သား ကြည့်မြင့်တိုင်ဘက်သွားရင်း လေပေါသွားကြတာ လမ်းတွေမှားပြီး ပြန်ပတ်မောင်းခဲ့။
ဘော်ဘော်အိမ်ရောက်တော့ အားနာပါးနာနဲ့ 2ပုဂံအ၀စားခဲ့၊
စားပြီးပြန်တေ့ာ ကိုရီးယားထမင်းလပ်ကို အားနာလို့ အ၀ထပ်စားခဲ့။
နေ့လည်မင်္ဂလာဆောင် ရှိတော့ နုတ်ဆက်ပြိးပြန်ခဲ့။
ပြန်တွက်ကြည့်တော့ ဒီဘော်ဘော်ကျွေးတဲ့ထမင်းစားခဲ့တာ သုံးခါရှိပြီး
(မန်းလေးမှာတစ်ခါ ၊စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်မှာတစ်ခါ၊ အခုရန်ကုန်မှာတစ်ခါ)
ကျနော်က တစ်ခါမှပြန်မကျွေးဖြစ်တာ သတိရခဲ့။
နောက်တော့ လုလင်နဲ့လမ်းခွဲပြီး မင်္ဂလာဆောင်သွားဘို့ပြန်ချိန်းခဲ့။
ရန်ကုန်မှာနေပြီး အဲ့ဒီဘုရားဘက်ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူဘူး
အရမ်းကို သဘောကျလို့ တစ်ခါတစ်ခေါက်တော့ အရောက်သွားအုံးမယ် လေးပေါက်ရေ.
အကြွေးတော့ မမှတ်နေပါနဲ့တော့နော် ၂လပိုင်းကုန်တစ်ခေါက်လာအုံးမယ်
တောက လူတွေက အမြဲဧည့်မျှော်နေကြတာလေ
အဲဒိ ဘုရား ကိုတည်တဲ့ သီလရှင်ဆရာကြီး က ဘုရား မပြီးခင် ပျံလွန် သွား ပြီးနောက် ပိုင်း လက်စမသပ်
ဖြစ်ကြတော့ဘူး ထင်တယ်။ သဗေညု ပထိုးတော်ကြီး လို့ ပဲခေါ်သလားလို့ ။မန်းလေး ကလာတဲ့သူကမှရောက်ဖြစ်သေးတယ် ကိုယ်က နီးရက်နဲ့ တခါမှမေ၇ာက်ဖြစ်ဘူး။
ဟုတ်တယ်ဗျ မေးကြည့်တော့ ပြောတယ်
အထဲလဲရောက်ရော လက်ဆော့ချင်ဇောအားကြီးပြီး ပြန်စဉ်းစားတာ မမှတ်မိဘူးဖြစ်သွားတာပါ။
ကျနော့် မှတ်ဥာဏ် ညံ့လို့ပါဗျာ
အဲဒီစေတီကြီးကို တည်တဲ့ သီလရှင်ကြီးနာမည်က ဒေါ်ဓမ္မေသီ မဟုတ်လား။ မိန်းမသား သီလရှင်တဦးက ဒီလောက်ကြီးတဲ့ စေတီကြီးကို တည်နိုင်ခဲ့တာတော့ သူ့ဘုန်းကံကလည်း မခေဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ နှမြောစရာက ဆက်မတည်နိုင်တော့တာပဲ။ အဲဒီ သီလရှင်ကြီး ရှိတုန်းကလည်း အချို့ ရဟန်းတော်တွေနဲ့ အချေအတင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာရှိတယ်။ သီလရှင်ကြီးကလည်း တန်ခိုးထွားနေချိန်ဆိုတော့ ရဟန်းတော်တွေ အပေါ် မရိုကျိုးခဲ့တာတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
မြောက်ဥက္ကလာသားတွေရဲ့ ဆွေဘုရား မျိုးဘုရားကတော့ မယ်လမုစေတီပဲ။
မြောက်ဥက္ကလာသား တွေကတော့ ဒေါ်ဓမ္မေသီ စေတီ လို့ ခေါ် ကြပါတယ် .. ခြုံနွယ် ပိတ်ပေါင်းတွေ နဲ့ . . . . . လက်စမသတ် နိုင် ပုံပေါ်ပါတယ် …
မဟာကျိန် သစ္စာရှင် ဘုရားကြီးရယ်အခုပုံထဲက
ပုဂံဘုရားပုံတော် ဘုရားကြီး တို့ကို စိတ်ရောက်ပြီး
မဟာကျိန်သစ္စာကတော့ ဒီတစ်ခေါက် မရောက်ခဲ့ဘူး။.
ဆိုတေး တောင်မှ အဲဒီမှာ VCD ရိုက်တာ ပုဂံဘုရားမှာ ဖိနပ်စီးပြီးရိုက်တယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးသွားလို့မနည်းရှင်းလိုက်ရသေးတယ် ။
သူက ဗုဒ္ဓဘာသာပါ အဲဒီနေရာမှာ ဘေးကလာကြည့်တဲ့သူတွေလဲ ဖိနပ်စီးကြပါတယ် ဘာညာဆိုပြီး မနည်းရှင်းလိုက်ရတယ် ။ ဆေးပြန်မသုတ်ခင်တုန်းကသာဓာတ်ပုံသွားရိုက်ကြည့် ပုဂံကိုရောက်နေသလိုလိုနဲ့ ။
စီးလို့မရပါဘူး.. ကျွန်တော့ ဘော်ဘော်ကိုယ်တိုင်သွားတရိုက်ထာခဲ့တဲ့ သက်သေပါ.. ဒီမှာ ကြည့်ပါ..
ဒါက 7days က comment ပါ
ဘိုအုပ်ရေ ကျနော်တို့သွားတုံးက နေအရမ်းပူတော့ ကျောင်းဝင်းထဲတော့စီးသေးတယ်ဗျ။
ဘုရားပေါ်က တော့ စီးလို့မရပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျ ဒီဘုရားက အတွင်းထဲထိ ဖိနပ်စီးလို့ရပါတယ်။
ဖေပေါက်ကြီး အုန်းထမင်းတွေရော ကိုရီးယားထမင်းတွေရော အစုံစားပြီး ဖက်တီးကြီး ဖြစ်သွားလို့ ဒါ့ပုံတွေ မရိုက်ရဘဲဖြစ်နေအုံးမယ် လျှော့စား လျှော့စား ဖေပေါက်ရှိနေတာ မြန်မာပြည်အနှံ့ ထိုင်ရာမထ ရောက်ဖူးလို့ ကျေးဇူးတွေ တင်နေရတာ
အော် လေးပေါက်ဓါတ်ပုံတေမြင်မှ သွားဖစ်အောင်
သွားရတော့မလိုဖစ်နေဘီ။ နေရာကဝေးပြီး ကားဝင်းသွားမှမြင်ရတာဆိုတော့
အဲဒီပုထိုးကိုတည်တဲ့. ဖွားလေးနဲ့သိပါတယ်..။ စကားပြောဖူးတယ်..။
ယူအက်စ်.. လော့စ်အိန်ဂျလိစ့်မှာ.. အိမ်ဝယ်… တပါးထဲသီတင်းသုံးတာပါ..။
အတွက်မမှားရင်.. အခုလောက်ဆို… ဘာသာရေးနဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ရနေလောက်ပြီ..။
ထုံးစံအတိုင်း.. ဖွားလေးရဲ့… အိပ်မက်အရပါပဲ..
ဆရာကြီး၊ ဆရာလေးဆိုလို့ဟာသ ပြောရဦးမယ်
တနေ့ နာရေးဖိတ်စာ လာအပ်တယ် .. သီလရှင် နာရေးပေါ့နော်
စာရိုက်တော့ အပ်တဲ့ သူက သီလရှင် ဆရာကြီး ဘယ်သူ ပေါ့နော် ဆိုတော့
အနော့ သူငယ်ချင်းက ဆရာကြီးလို့မကြားဖူးတော့ ဆရာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး
ခင်ဗျားမှားနေတယ် ဆရာလေးပဲဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီးရိုက်ပေးလိုက်တယ်..
အပ်တဲ့သူကလဲ မသိဘူး ဘယ်ဟာအမှန်လဲ
ခဏနေတော့ အပ်တဲ့သူကု ပြန်လာပြီး ဆရာလေးမဟုတ်ဘူး ဆရာကြီးပဲရိုက်ပေးပါ ဆိုတော့လဲ
အနော့ သူငယ်ချင်းက ဆရာကြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆရာမကြီး ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ထပ်ရိုက်ပေးလိုက်ပြန်ရော
ဒီတစ်ခေါက်လဲကျရော အပ်သွားတဲ့ သူ ပြန်လာပြီး စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ သူ ပြောတဲ့ အတိုင်း ဆရာကြီးပဲရိုက်ပေး မရှည်နဲ့ ဆိုပြီး ကောသွားတာ ခံလိုက်ရလေရဲ့
အော် ထူးဆန်းတယ်နော် သဂျီးရဲ့ အမျိုးထဲမှာတောင် မယ်သီလရှင် ရှိတာကိုး။ ယူအက်စ်မှာ သီတင်းသုံးတာကိုး။ အဲဒီတော့ အခေါ်အပြောရော အဆင်ပြေကြရဲ့လား။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက ကိုယ့်အမျိုးအရင်းဖြစ်လည်း ဘာသာမတူတာနဲ့ ကာဖီရ်ဆိုပြီး ဓမ္မ န္တရာယ် သဘောမျိုး ဆက်ဆံတတ်တယ် ကြဉ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးလို့ပါ။ ကြားဖူးတာပါ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။
မွတ်ဆလင်တွေမှာ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုး ရှိမရှိ ဖြေပေးပါအုံးနော်။ သဂျီးကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဖူးဆိုတာ ယုံပါတယ်။
တခါတလေ လောကကြီးရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုကလဲ အကိုက ဗလီဆရာ ညီမက မယ်သီလရှင် ဖြစ်တာမျိုး ရှိနိုင်တာပဲ။ ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတောင် လင်ကမုဆိုး မယားက သောတာပန်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှိခဲ့တာပဲ။
ကိုကျော်သူနဲ့လည်းအမျိုးတော်သဗျ…။ မယုံရင် ဖွားလေးရဲ့နာရေးကြည့်..
နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁
ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ရေတွင်း (တောင်ပိုင်း)၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မေသက သီလရှင်စာသင်တိုက်ကြီး၏ ဦးစီးပဓာန နာယက၊ ရန်ကုန်သဗ္ဗညုပုထိုးတော်ကြီး တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော အဘွားလေးဓမ္မေသီ သက်တော် (၆၈)၊ သိက္ခာတော် (၅၀) သည် ၆.၁၁.၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် (၈း၂၅) နာရီတွင် ဓမ္မေသက သီလရှင်စာသင်တိုက်၌ ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသွားပါသဖြင့် ဖွားလေး ဓမ္မေသီ၏ရုပ်ကလာပ်အား နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ အအေးစနစ်သုံး (Cool Box) ဖြင့် အပူဇော်ခံထားရှိပြီးသည့်နောက် ၁၂.၁၁.၂၀၁၁ စနေနေ့ ညနေ (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဓမ္မေသက သီလရှင်စာသင်တိုက်ကြီးမှ ရေဝေးသုဿန်သို့ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များ၊ တပည့်ဒါယကာ ဒါယကာမများနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများမှ အဘွားလေး၏ နောက်ဆုံးခရီး အား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ရေဝေးသုဿန်ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော လောင်တိုက်ပြာဿဒ်၌ မီးသင်္ဂြိုလ်ခဲ့ပါသည်။
ဆိုတေးကိစ္စပြောနေတာနဲ့ ကပေါက်ပုံအကြောင်းတောင် မပြောရသေးဘူးဗျ
အရင်တုန်းက ဆေးမသုတ်တုံးကတော့ ပုဂံလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့
ပထမဆုံးပုံ လှပါတယ်ဗျို့ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးနဲ့
နဲနဲလေး ထပ်ခွာလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်
အော် ကပေါက်က Canon PowerShot A2200 နဲ့ရိုက်ထားတာကိုး ..
resolution က 14.1 တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ အနော့ကင်မလာ ထက်တောင် resolution မြင့်သေးတယ်
ကျနော်ကင်မရာက ပေါက်စနလေးပါ ဘိုအုပ်ရေ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က တစ်ခါ ရောက်ဖူးတယ် …
အခုဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကွန်မန့်တွေမြင်တော့ ပြန်သတိရသွားတယ် … အရမ်းကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ တည်ဆောက်ထားတာ …
တစ်ခေါက်လောက် ထပ်သွားအုန်းမယ် …
ဦးပေါက် က မှ ရိုက်ပြီး တင်ဖြစ်သေးတယ် .. ကျွန်တော် ကတော့ လူပုံ ပဲ ရလိုက်တယ် .. အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစား တာတောင် လိုချင်တဲ့ အကွက် ကို မရလိုက်ဘူး . . .. . . . . အားတဲ့ ညနေပိုင်း သွား ကစ် ကြည့်ဦးမယ် ..
ရန်ကုန်မှာနေပြီး အဲ့ဒီဘုရားဘက်ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူဘူး..အဟုတ်ဗျာ…
ဓါတ်ပုံတင်ပေးတဲ့ ကိုပေါက်ကြီးရော..ပုထိုးတော်ကြီးတည်ခဲ့တဲ့ ဖွားလေးအကြောင်း
လေးပေါက်ရေ တကယ်ကြီးရန်ကုန်မှာ ၅ နှစ်နေခဲ့တာမဖူးဘူးတဲ့ဘုရားစေတီတွေအများကြီးရယ် ကပ်ကျော်တွေလည်းပါသပေါ့ လေးပေါက်ကောင်းမှုနဲ့ဖူးရပြီ။ လေးပေါက်ကဇွဲတော့အတော်ကောင်းတယ် အားကျပါမိပါရဲ့။ နောက်တခါဆူးတွေ ခြုံတွေ သတိထားပါလေးပေါက်ဆူးခြစ်တာကကိစ္စမရှိ မြွေပါးကင်းပါးစိုရိမ်ပါ၏။
ရန်ကုန်မှာနေပြီး အဲ့ဒီဘုရားဘက်ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူဘူး ။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဦးစီးတဲ့ ဘုရားလို့ ကြားတာပဲ ။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပြုတ်သွားလို့ တန်းလန်း ရပ်သွားတယ် ကြားတာပဲ ။